प्रदेश ५ का क्‍वारेन्टाइनमा रहेकाहरुको र्‍यापिड टेस्ट गरिने « Chhahara Online
प्रदेश ५ का क्‍वारेन्टाइनमा रहेकाहरुको र्‍यापिड टेस्ट गरिने
२७ चैत । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश ५ सरकारले क्वारेन्टाइनमा बसेका सबै व्यक्तिको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट(आरडीटी) गर्ने भएको छ ।
प्रारम्भिक रुपमा कोरोना भए नभएको थाहा पाउन २ हप्ता क्वारेन्टाइनमा बसेका सबै व्यक्तिको द्रुत परीक्षण थालेको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए।
क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लागि बिहीबारदेखि २ जिल्ला हेर्नेगरी ६ वटा वटा स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटेको छ। ‘आजदेखि क्वारेन्टाइनमा बसेर २ हप्ता कटाएका हरेक व्यक्तिको आरडीटी हुनेछ,’ मन्त्री बरालले भने, ‘त्यसमा नेगेटिभ रिपोर्ट आए घरमा पठाइने छ। पोजिटिभ भए स्वाब परीक्षणका लागि पठाइने छ। ’
हाल प्रदेश ५ का १२ जिल्लामा २ हजार ५ सय ६ जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। यी सबैको द्रुत परीक्षण गरिने छ। आरडीटीका लागि संघीय सरकाले बिहीबार नै प्रदेशमा ५ हजार थान किट पठाएको छ। डा. रमेश खरेलको नेतृत्वमा आएको चिकित्सकको टोलीले प्रदेशमा किटसहित विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण ल्याएको थियो। टोलीले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरोकारवालासहितलाई भेटी कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामबारे जानकारी लिएको थियो।
प्रदेशमा अहिलेसम्म कोरोना आशंकाका एक सय ५२ जना बिरामीको स्वाव परिक्षण गरिएको छ। यसमध्ये एक सय २५ जनामा कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि भएको छ। २७ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। हाल ३३ जना आशंकाका बिरामी कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वाथ्य महाशाखा प्रमुख डा. उमाशंकर चौधरीले बताए।
हाल प्रदेशको भैरहवामा रहेको कोरोना प्रयोगशालाबाटै कोरोना भाइरसको परीक्षण हुन थालेको छ। त्यहाबाट अहिलेसम्म ३६ जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा ३१ जनाको रिपोर्ट आएको छ। ५ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। यस प्रयोगशालामा कोरोना पोजिटिभ आए त्यसको थप परीक्षण गर्न काठमाडौं पठाउने डा. चौधरीले बताएको खबर कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।